Shirkadda Isgaadhsiinta ee TELESOM oo soo bandhigtay Adeeg cusub oo casri ah | Berberanews.com
Home WARARKA Shirkadda Isgaadhsiinta ee TELESOM oo soo bandhigtay Adeeg cusub oo casri ah
Shirkadda Isgaadhsiinta ee TELESOM oo soo bandhigtay Adeeg cusub oo casri ah
Hargeysa-(Berberanews)- Shirkadda ugu isticmaalka badan adeegyada ay bixiyaan Shirkadaha Isgaadhsiinta Somaliland ee Telesom oo hore u bixin jirta adeegyo kala duwan oo ay bulshadu is-ticmasho, ayaa maanta soo bandhigtay adeeg cusub oo ay ku soo kordhisay Isticmaalka Kaadhadhka ay bixiso soo dhicitaankooda, adeeggaas oo la yidhaahdo ‘ILA-MAQAL’.
Madaxa Xafiiska Saxaafadda ee Shirkadda TELESOM Mustafe Aadan Muuse oo Xafladdaa furay, ayaa sheegay in ujeeddada xafladdoodu tahay inay bulshada ugu soo bandhigaan adeeg cusub oo ay Shirkadda Telesom soo kordhisay.
Xaflad ay maanta Masuuliyiinta Shirkadda Telesom ku qabteen Xaruntooda guud ee magaalada Hargeysa, ayey ku soo bandhigeen Adeeggaas, sida loo isticmaali kari, muhiimadda uu leeyahay iyo waxa uu soo kordhinayo. Maamulaha qaybta Horumarinta Ganacsiga iyo Maaliyadda ee Shirkadda Telesom Cabdisalaan Ismaaciil Nuur, oo kulankaa ka akhriyey qoraal ay soo saareen, ayaa sharraxaad ka bixiyey faa’iidada uu leeyahay adeegga Ila-maqal ee ay Shirkad ahaan soo kordhiyeen. Waxaanu qoraalka uu Cabdisalaan halkaa ka akhriyey u qornaa sidan:-
“Shirkadda Telesom waxay ku can-baxday hal-abuurnimo iyo inay ku horeyso waqti kastaba sidii bulshada loogu soo bandhigi lahaa adeegyo casri ah, oo kabaya horumarka noloshooda. Telesom waa shirkaddii ugu horeysay ee dalka keenta adeega caanka ah ee ZAAD oo macaamiishayada u suurtogaliyay inay macaamalaadka lacageed ku isticmaalaan mobile-kooda. Waxa kale, oo ay shirkadda Telesom ku suntan tahay inay tahay shirkaddii ugu horeysay ee dalka keenta adeegga mobile-ka, Internet, 3G, GPRS-ka, Adeegyada AQOON-MAAL oo ka kooban warar (News), qaamuus isugu turjumaya Somali/English, Wikipedia iyo macluumaad badan oo faa’iido u leh bulshada.
Haddaba, kulankeenan maanta waxa aanu ku soo bandhigaynaa adeeg kale oo casri ah, xiiso badan, isla markaana saamayn mug leh iyo isbedel ku yeelan doona isticmaalka Mobile-da Telesom. Adeeggan oo aanu ugu talogalnay in macaamiishu kaga nastaan codka macno-darrada ah ee mobile-ka (ringing), kaasoo aanu ku bedelnay codad faa’iido iyo saamayn ku yeelanaya dhagaha macaamiisha.
Adeeggan waxaanu ugu wan-qalnay ‘ILA-MAQAL) (Ringback tone): Waa adeeg dalka ku cusub oo muddadii uu tijaabada ahaa xiisogeliyay macaamiisha, adeeeggan waxa ku jira dhawr cod kala ah:
Mustaqbalka waxa lagu biirin doonaa barnaamijyo madadaalo iyo murti Soomaaliyeed ah, sida gabayo, maahmaaho iyo xikmado aan xajiin iyo turxaan lahayn. Si loo isticmaalo adeeggan ‘Ila-maqal’ macaamiishu waxay garaacayaan number-ka 118, ka dibna isaga ayaa ku hagaya.”
Previous articleXukuumadda Somaliland iyo Ururka SOLJA oo Heshiis Isfaham ka gaadhay khilaafyo muddooyinkan u dambeeyey dhexmiranayay Warbaahinta Madaxabannaan iyo Dawladda
Next articleMadaxweynaha Somaliland oo kulan la yeeshay Safiirka Maraykanka u qaabbilsan Soomaalida